रु रु जलविद्युत परियोजनको आईपीओ बाँडफाँट - ParyatanBazar.com
रु रु जलविद्युत परियोजनको आईपीओ बाँडफाँट
वैशाख ३, काठमाडौं । रु रु जलविद्युत परियोजनको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । विक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलको कार्यालयमा शुक्रवार बाँडफाँट भएको हो । ३७ हजार ९१६ जनाले गोलाप्रथामार्फत १० कित्ताका दरले शेयर पाएका छन् ।
यसरी बाँडफाँट गरेर बाँकी रहेको ७ कित्ता शेयर १० कित्ताभन्दा बढी माग गरी आवेदन दिएका ७ जनालाई १/१ कित्ताका दरले थप पाएका छन् । कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओमा कुल १६ हजार ८३ हजार १२१ जना आवेदकबाट २ करोड ३५ लाख ४६ हजार ४४० कित्ता शेयर खरीदका लागि आवेदन परेको थियो ।
जसमध्ये ८ हजार ५३५ जना आवेदकको आवेदन रद्ध भएकाले विक्री प्रबन्धकले जानकारी गराएको छ । कम्पनीले चैत २० गतेदेखि २४ गतेसम्म आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीले प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता रू. १२० मा सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।
सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको कुल ४ लाख ७ हजार ७०६ कित्तामध्ये ८ हजार १५४ कित्ता कम्पनीका कर्मचारीहरुको लागि र २० हजार ३८५ कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सु्रक्षित गरी बाँकी रहेको ३ लाख ७९ हजार १६७ कित्ता सर्वसाधारणको लागि आइपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
कम्पनीले गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा ५ मेगावट क्षमताको रु रु जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरी वि.सं २०७१ चैत ९ गतेदेखि व्यापारीक उत्पादन शुरु गरेको छ । उक्त आयोजनाबाट प्रतिदिन ४ दशमलव ३६ मेगावट विद्युत् उत्पादन भइरहेको कम्पनीले जानकारी गराएकोछ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११८ दशमलव ८४ रहेको छ ।